Olee otú ịhọrọ a monitor?
ị bụ ebe a: Home Atụmatụ Olee otú ịhọrọ a monitor?
N'ụwa nke taa, Ewoo, -enwekarị ihe dị iche iche iji chebe onwe gị na ndị ị hụrụ n'anya si-enweghị isi radieshon. Ma, ọ bụ nnọọ ihe siri ike, n'ihi na ndị a ụzarị na-adịghị ahụ anya na imperceptible. The ọnụnọ na ọrụ a anụ ụlọ na gburugburu ebe obibi ike na a tụọ nke ezinụlọ dosimeter.
Na ihe ize ndụ nye ahụ ike, nke nwere ike na-eche ihu ugboro ugboro na ọnụnọ nọ n'ógbè na elu radieshon, amagh i ekwu okwu. Ya mere, ọ dị mma na-echebe onwe gị ma na-echebe gị na ezinụlọ gị na ya.
Dosimeter home - a pụtara dị mfe ngwaọrụ, Kwadoro site na Geiger counter. Ọ jikoro ikuku ndabere radieshon, ngwaahịa, dị iche iche na-achị. Ya data bụ ukwuu ezi, ma iji ya n'ụlọ zuwo. Ọzọkwa, ọ bụ nnọọ ihe dị mfe ịghọta nwoke-layman.
Ihe ị na-elekọta ya, atụtụ ezinụlọ dosimeter?
Ị ga-doo anya, Iji ngwa oru.
Rịba ama na ọnụ ọgụgụ na iche nke sensọ. Ọ na-adabere ngwaọrụ uche.
The ngwaahịa ga-esonyere ndị kwesịrị ekwesị akwụkwọ nke àgwà.
The ngwaọrụ kwesịrị kọmpat na-adaba adaba, otú i nwere ike ya na ha enweghị nsogbu ọ bụla.
Dị ịnara ọrụ, nke ga-mfe mmesho.
Iji ngwa oru?
Dosimeter home bụ nnọọ mfe iji rụọ ọrụ, ọ dị mfe ịmụta iji.
ntị, ọ nwere ike na-eji dị otú nzube:
-Amata ọtụtụ ndabere radieshon n'ime ụlọ ma ọ bụ n'okporo ámá;
achọpụta na e redioaktivu ọcha ke oriri;
ịlele maka redioaktivu radieshon si ọ bụla ihe.
tupu, ị na-amalite nyocha, Anyị kwesịrị icheta, na agwa bụ mgbe nile ihe eke ndabere radieshon, nke dị mkpa na-adịghị njọ ka ahụ ike. Ma ya ngafe pụrụ ibu mgbagwoju na ya pụta.
Iji tụlee na ọkwa nke radioactivity eji ezinụlọ dosimeter, ga:
Tụgharịa na ngwaọrụ. ItoÚghari dose ka ọhụrụ ọmụmụ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe ndị na-emeghe ohere (n'okporo ámá, ikpe, ọ bụla n'ógbè), -eso, nke mere na ngwaọrụ na-adịghị metọọ. Ọ bụrụ na ule na saịtị - ụlọ, -eduzi nnyocha na ọtụtụ nke ya ebe - nso mgbidi, Central, n'uko.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inyocha ihe ma ọ bụ nri ngwaahịa, Ngwaọrụ dị ka nso ka ike ya. Ị nwere ike mepụta ndị a hà na na ụlọ ahịa ma ọ bụ na ahịa, tupu o kwere omume zuo: ọ bụ ngwa ngwa na ọ bụ nnọọ adaba.
Ndị dị otú ahụ a obere ihe na ị ga-ihe dị oké nnyemaaka.
Emeela ahụ ike ha na ha hụrụ n'anya.
dentistry. Olee otú ịhọrọ nri ọgwụ eze
Ụmụ nwanyị ịkpụ ntutu – otú ịhọrọ?